Ilaaladda laga hayo xudduudaha dalka Iswiidhan oo la kordhin doono | Somaliska
Dalkaan Iswiidhan ayaa dowladdu qorsheeyneysa in muddo kordhin ku sameeyo ilaaladda laga hayo xuduudaha dalka. Arrintan ayaa timid ka dib markii dalalka Jarmalka iyo Denmark ay muddada u kordhiyeen ciidanka ilaalada ka haya xuduudaha dalalkooda.
Wasiirka garsooka Morgon Johansson, ayaa isagoo ka qeyb galaya kulankii wasiiradda garsoorka iskugu yimadeen magaaladda Buruksel ee dalka Biljem, sheegay in dowladiisa ay iminka ku camal jirto siddii ay muddo kordhin ugu sameeyn laheyd ilaaladda laga hayo goboladda koonfureed ee dalka.
“Sida ay noola muuqato waa mid loo baahan yahay in xaaladdaha ammaan ee Yurub ay laleeyahay koontoroolo. Marka laga hadlo falkii argagaxiso ee ka dhacay bishii abriil dalka. Waa mid mudan baan is leeyahay in la ogaado cida dalka soo galeeysa” ayuu yiri Morgon..
Doorashadda kaniisadaha ee 2017-ka: Xisbiga SD oo doonaya ineey ku soo baxaan
Ka warama soo galootiga u codeeyay SD?